Royal Heart Animal Shelter – Mandalay – KuMel
Royal Heart Animal Shelter – Mandalay
Royal Heart Animal Shelter in Mandalay
၂၊၊ လိုအပ်သည့် စေတနာ့၀န်ထမ်းဦးရေ
အကန့်အသတ်မရှိပါ။ အထူးသဖြင့် တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူ၊ မကြောက်တတ်သူ၊ စိတ်ရှည်တတ်သူသာဖြစ်ရပါမယ်၊၊
စစ်ကိုင်းခြံ၊ မင်းကွန်းသွားတဲ့လမ်း၊ ဝါးချက်စက်ရုံအကျော်၊ အာလောင်ရွာ၊ ရှစ်မျက်နှာချောင်သို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရောက်ရင် ဘယ်ဘက်ကွန်ကရစ်လမ်းလေးကနေနှစ်ပြလောက် တက်လာခဲ့ရင်ရောက်ပါပြီ။
Deep cleansing အတွက်ရည်ရွယ်တာကတော့ ဒုက္ခိတခွေးလေး ကြောင်လေးတွေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပိုကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်၊၊ ခုလိုလုပ်အားပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်၀န်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊ စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ဂိလာန တိရိစ္ဆာန်လေး များလည်း လေကောင်းလေသန့်ရခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်၊၊
လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ ခွေးလေးများနှင့်ကြောင်လေးများ၏ အညစ်အကြေးများ ဆေးကြော ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ အဆောင်များအတွင်းရှိ လှောင်အိမ်များအောက်မှ အမှိုက်များရှင်းလင်းခြင်း၊ ခြံအတွင်း အမှိုက်ကောက်ခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်၊၊
၆၊၊ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ
အမှိုက်များ၊ အညစ်အကြေးများ ဆေးကြော ရှင်းလင်းပေးရမှာဖြစ်လို့ ၊ ရွံတတ်သူ၊ နှလုံး၊ အဆုတ်မကောင်းသူတွေ အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး၊၊ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်၊ တိရိစ္ဆာန်ချစ်ပြီး စိတ် ရှည်တတ်သူဖြစ်ရပါမယ်၊၊ ပညာအရည်အချင်း ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူး၊၊
၇၊၊ လုပ်ငန်းစမည့် နေ့ရက် ၊ အချိန်
ယခုပိုစ့်တင်သည့်ရက်မှစ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူပါမည်။
၈၊၊ လုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ကြာမြင့်ချိန်ချိန်
မည်သည့်ရက်မဆို ပိတ်ရက်မရှိ၊ မိမိအားလပ်ချိန်များတွင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
အိမ်ကနေ အ၀တ်အစား အကြမ်းတစ်စုံ၊ မျက်နှာဖုံး (Mask) ၊လက်အိတ် (Glove) စသည်တို့ကိုယူခဲ့ဖို့တော့ လိုပါတယ်၊၊
စေတနာ့၀န်ထမ်းများနဲ့အတူ ခြံမှကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်းများပါ အတူလုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်လို့ သီးသန့် လေ့ကျင့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။
KuMel Volunteer Connection
09 420 738 934
မှတ်ချက်။ ။ လမ်းဘေးမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သနားစရာခွေး၊ ကြောင်လေးတွေကို အခက်အခဲမရှိ ကယ်တင်ကုသပေးနိုင်ရန်နှင့် ကယ်တင်ပြီးသား ခွေး၊ကြောင် ၇၀၀ ကျော်အတွက် နေ့စဉ်ကျွေးမွေးစရိတ်တွေအတွက် လှူဒါန်းလိုပါက 09772301864, 09976855339 သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Sagaing Compound, on the way of Mingun, Arlaung Village, Mandalay.
To createabetter environment, animals being thrown away and haveahealthy life for handicapped animals.
For cleaning the dog’s nursing home, feeding and taking care of the handicap dogs and cats.
Must be an animal lover, must be patient.
Can apply now
No Limitation (You can share with your time as much as you can)
Remark: Need to bring extra clothes, masks, and gloves because you will have to do cleaning and caring for the dogs and cats.
Training will be provided by the current senior workers
Remark: If you want to donate food and money for animals, please contact directly to Royal Heart Animal Shelter: 09 772301864, 09 976855339
We share with heart, we care with love.
Job Category Animals
Name / အမည်*
Gender / ကျား၊ မ*
Age / အသက်*
Address / လိပ်စာ*
Email / အီးမေး
Phone Number / ဖုန်းနံပါတ်*
Education / ပညာအရည်အချင်း
Work Experience / အလုပ်အတွေ့အကြုံ
Interest and Hobbies / စိတ်ဝင်စားမှု နှင့် ဝါသနာ
Languages Spoken / ဘာသာစကား
Availability and Volunteer Assignment Preferences*
Mon-Fri Weekends Once A Week One Time Only As Needed More than OnceaWeek Other
5\_9, 1st floor, Bogalay Zay street (lower block), Botataung Township, Yangon, Myanmar.
+959420 738 934
Copyright © 2020 KuMel Volunteer Connection - All rights reserved.
Powered by Z.com Myanmar.